XOG: Saddexda QODOB ee lagu xaliyay khilaafkii Mahdi Guuleed iyo Cabdi Xaashi | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii XOG: Saddexda QODOB ee lagu xaliyay khilaafkii Mahdi Guuleed iyo Cabdi Xaashi
XOG: Saddexda QODOB ee lagu xaliyay khilaafkii Mahdi Guuleed iyo Cabdi Xaashi
Muqdisho (Dalkaan.com) – Ra’iisu Wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa shalay ku guuleystay inuu xaliyo xiisaddii dhowrkii Cisho ee lasoo dhaafay u dhaxeysay Ra’iisul Wasaare ku xigeenka Mahdi Khadar Guuleed iyo guddoomiyihii hore ee Aqalka Sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi.
Labada nin ayaa isku heystay awoodda iyo hab jiheynta doorashada Golaha Shacabka ee Reer Woqooyiga. Dhowrkii Maalmood ee lasoo dhaafay kulamo ayaa socday lagu raadinayey in xiisadaan lagu damiyo, laakiin dhanka Mahdi ayaa la sheegay inuu culeys badan ka jiray, taasoo loo aaneeyey in cid kale oo ah Villa Somalia uu go’aanka xogooda jiray.
Rooble wuxuu faafiyey inuu Labada Nin ee Cabdi Xaashi iyo Mahdi la kulmay uuna xaliyey mad-madowgii jiray.
Khilaafka Labada Nin ayaa hakiyey doorashada Reer Woqooyiga isagoo sababay inuu kala qeybsamo guddigii doorashada Reer Woqooyiga, balse wuxuu Rooble sheegay inay isaga iyo labadaas hoggaamiye isla garteen markii ay kulmeen in doorashada lasii wado.
Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka Mahdi Khadar Guuleed waxaa isaga si gaar ah loogu eedeeyey sad bursi iyo inuu rabo in kuraasta ay badi kusoo baxaan xubnaha ay wataan Farmaajo iyo Fahad, halka Cabdi Xaashi uu ku doodayey in ama wax la qeybsado ama awoodda loo celiyo odayaasha dhaqanka oo hannaanka doorashada si toos ah loo dabaqo.
Haddaba maxaa lagu xaliyey xiisadda?
Illo ka tirsan xafiiska Ra’iisu Wasaare Rooble oo aan la hadalnay waxay sheegeen in Labada Nin ee Cabdi Xaashi iyo Mahdi lagu qanciyey:
1- in Guddiga doorashada loo madax banaaneeyo shaqadooda oo iyagu korjoogto bis ka noqdaan mashruuca doorashada.
2- In Odayaasha Dhaqanka loo dhaafo xulista ergada iyo qeybinta iyadoo la isla fahmaayo sax ahaanshaha odayaasha iyo saamiga Beelaha.
3– Labada nin waxaa lagu qanciyey in marka wixii olole ah oo sharci ah laga tago inaysan doorashada mar kale faragelin.
Seddexdaan qodob iyo heshiiska kadib, Ra’iisul Wasaare Rooble wuxuu la kulmay Odayaasha Dhaqanka ee Reer Woqooyiga, wuxuuna u sheegay in laga fariisiyey dhinacyadii siyaasadda loona madax baneeyey doorashada Kuraasta iyo hab-maamulka Beelaha .
Xubnaha Reer Woqooyiga iyo Ra’iisul Wasaaraha ayaa isku fahmay in lasii wado geediga doorashada oo aan la joojin.
Afar Kursi oo kamid ah Golaha Shacabka ee Reer Woqooyioga ayaa Todobaadkaan la dooran doonaa, taasoo ka dhigan in Xafiiska Rooble uu laalay mid kamid ah qodobadii ay mucaaradka soo jeediyeen oo ahaa in doorashada la joojiyo.
Sida muuqato lama joojin doono doorashada. Xubno kamid ah Reer Woqooyiga oo aan la hadalnay waxay sheegeen inuu Ra’iisul Wasaare Rooble ka dalbaday in Kuraasta dhiman la dadajiyo si loo xaqiijiyo natiijada guud ee doorashada dalka.
Tababaraha Everton Benitez oo ku dhawaaqay Bixitaanka Digne
Tababaraha Everton Rafael Benitez ayaa ku dhawaaqay in Lucas Digne uu doonayo inuu baxo. Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Faransiiska ma uusan ciyaarin tan iyo 1dii December, waxaana xiiseynayay...
Arsenal oo soo saartay liiska seddexda ciyaaryahan ee khadka dhexe ee...
Deg Deg Dagaalka Farmaajo & Rooble oo Gaaray Meel Culus. Siyaasiyiin...
Labo Siyaasi oo Dalka Wax weyn u Qabtay 19/12/2021
Anthony Martial oo ka hadlay sheegashada Ralf Rangnick ee ah inuu...
Kylian Mbappe oo go’an ka qaatay in uu January u dhaqaaqo...
DF Soomaaliya oo war cusub kasoo saartay khilaafka Jabuuti